एक परिवारको उत्थानका लागि १७ हजार मानिस चढाइयो - Sidha News
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अहिले धेरै परिचय बनिसकेको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट माओवादी सुप्रिमो (अध्यक्ष) बाट अहिले झण्डै आधा दर्जन पदवी थपिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) हुँदै अहिलेपनि यो देशको बागडोर हिस्सा सम्हालेका व्यक्ति हुन् प्रचण्ड ।
सायद हामी जस्तै उनीपनि समाजिक सञ्जाल त पक्कै हेर्छन् । उनका बारेमा लेखिएका शब्द र तस्विरले हामीलाई त सोच्न बाध्य हुन्छ भने उनलाई कस्तो होला ? पक्कै नरमाइलो त लाग्छ नै होला । यसको खोजी केही समयपछि गरौँला । आज कुरा गर्न खोजिएको विषय के हो भने कतिपयका लागेका घाउहरु निको भए, कतिपयका दागपनि पुरिए ।
कतिमा खाटा बसिसकेका छन् । आलै घाउ अहिले छैनन् । तर उनी माओवादीको सुप्रिमो हुँदा लागेका घाउहरुले उनलाई भने बारम्बार घाउ लगाइनै रहेको छ । उनले राम्रो विचार प्रवाह गर्नै हुन्न त्यही १७ हजार मानिस र माओवादीले निम्त्याएको द्धन्द्ध जोडि हाल्छन् । राम्रो फोटो हाल्नै हुन्न त्यही १७ हजार मानिसको मृ,त्यु उनीसँग जोडिएकै हुन्छ ।
चिकित्सक डाक्टरले उनको सुखमय परिवारको तस्विर राखेर लेखे एक परिवारको उत्थानका लागि १७ हजार मानिस चढाए । यो प्रश्नले के प्रचण्डको परिवार मात्र उत्थान भइरहेको हो त ? सोचनीय प्रश्न बनेको छ । आखिर नेपालीले यो किन बिर्सिन सकिरहेका छैनन् । यो त प्रतिनिधि प्रश्न मात्र हो । यस्ता हजारौले प्रश्न गरेका छन् । सायद यी केही प्रश्नहरु प्रचण्डलेपनि देखेको हुनुपर्छ । यसैले हामी यहाँ प्रतिनिधि प्रश्न मात्र राख्छौ ।